टेकनारायण भट्टराई	20 posts
एक दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका टेकनारायण भट्टराई मल्टिमिडिया रिपोर्टिङमा रूची राख्छन्।
सप्रमाण सडकबाट प्रश्न- प्रधानमन्त्रीज्यू, कहाँ छ तपाईँको सरकार ? (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं। काठमाडौंका सडकमा देखिएको सरकारी रवैयाबाट हैरान नहुने कमै होलान्? सरकार बारम्बार उही रवैया देखाउँछ। जनताले उस्तै विरोध गर्छन्। यो क्रम अनवरत चलिरहेको छ। तर हात लाग्यो श"न्य! सार्क र बिमिस्टेक सम्मेलनमा विदेशी पाहुनालाई देखाउनकै लागि रातारात सडक पिच गर्ने…
तपोवन डायरीः नेपाल छिरेर भारतीय सन्यासीले मच्चाएको उत्पात (भिडियो)
काठमाडौँ । साधु, सन्त, योगी एवं धर्मगुरु भन्नासाथ हाम्रो मस्तिष्कमा भारतीय प्रभाव हावी भएर आउँछ। किनकी नेपालमा भारतीय साधु–सन्तहरूको छ्याप्छ्याप्ती उपस्थिति र प्रभाव छ। समाचारहरू पनि भारतीय साधु–सन्त एवं गुरूहरूका भाँतीभाँतीका सुन्ने र पढ्ने हामीलाई बानी नै परेको छ। तर…
मुस्ताङ । यो बर्ष पनि दशैँ तिहारको बिदा मनाउने आन्तरिक पर्यटकका लागि मुस्ताङ रोजाइमा पर्यो । तर बेनी-जोमसोम सडकको डरलाग्दो यात्रा जो कोहीले सजिलै बिर्सन हम्मे पर्छ । कारण- जिउ कँपाउने खतरनाक सडक । यो सडक चौडा गर्ने र स्तरोन्नतिको…
काठमाडौँ । अमेरिका बस्ने नेपाली पाइलट प्रमोद रेग्मीले आफै जहाज बनाएर त्यसमा नेपालका प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलाई अमेरिकी आकाशमा उडाएका छन् । पाइलट रेग्मीले डेढ करोड आफ्नै लगानीमा १८ महिना लगाएर बनाएको जहाज अमेरिकी हवाइ विभागमा सूचिकृत भएर उडान अनुमति…
बालुवाटारमा ‘नो ओली’, ‘नो इन्ट्री’ (भिडियो ब्लग)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार ओली वंशको साधारण सभासिहत विभिद कार्यक्रम चल्यो । प्रवेश द्वारमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले ओली थर हुनेलाई धमाधम इन्ट्री दिन्थे भने अन्य थर, जातिका सबै आउट गरियो । शंकाको घेरामा परेका आगन्तुकले गेटमा ओली…
मोदी आउने बाटोमा लुकाइयो तीनकुने पार्क, जोगियो लाज [भिडियो कथा]
काठमाडौं । विमिस्टेक सम्मेलनको रौनकले काठमाडौं रंगिएको छ । त्यसमा पनि देशको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको छेउमै रहेको तीनकुने पार्क बिहेकी बेहुली झैं चिटिक्क पारिएको छ । तीनकुने पार्क भएर विशिष्ट पाहुनाहरूको सवारी कुँद्ने भएकोले हरेक यस्ता महत्वपूर्ण अवसरमा तीनकुने पार्कको…
विश्वभर तहल्का पिट्दै 'मेड इन नेपाल रोबोट', भेट्नुस् रेष्टुरेन्टकी रोबोट वेटर (भिडियो)
काठमाडौं । दरबार मार्गको एक रेष्टुरेन्ट हिजोआज निकै चर्चामा छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरूले समेत दक्षिण एशियाकै पहिलो रोबोटिक रेष्टुरेन्ट सुरू गरेका नेपाली युवाहरूकोबारेमा समाचार सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गरिरहेका छन् । नेपालमै निर्मित रोबोटले रेष्टुरेन्टमा वेटरको रूपमा सेवा दिएको र विश्वकै एक…
ओलीमा नजर– हाम्रा दुःख यिनै हुन्, प्रधानमन्त्री तिनै हुन् (मल्टिमिडिया रिपोर्ट–१)
मुग्लिन । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रा गर्दाका जोखिम र सास्ती अनेक छन् । यो सडकमा ब्यहोर्नु पर्ने हैरानी नयाँ भने हुँदै हैन । हिउँद होस् वा बर्खा, यात्रुका लागि कष्टसाध्य यात्राको विकल्प छैन । ढुकुटी सकाउने, दुःख लम्ब्याउने हाम्रो देशमा…
बुबाले रुँदै सम्झिए सन्दिपको त्यो अठोटः बा, म देशका लागि केही गर्छु
•टेकनारायण भट्टराई/आयुश गौतम/महेश धिमाल- चितवन । भरतपुर अस्पतालमा आमाको अप्रेसन थियो । सन्दिप लामिछाने केही क्षणका लागि अस्पताल पुगे । नेपाली टिम नामिबिया जानु अगाडिको भेट सम्झदै आमा कपिलादेवी भन्छिन्– ‘मलाई अस्पतालको बेडमा सुताएर उ धर्ती माताको कर्तव्य पूरा गर्न…
प्रधानन्यायाधीशको धम्कीः ‘बढ्ता हुँदै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई मारिदिन्छु’ [भिडियो संवाद]
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफूलाई मारिदिने धम्की दिएको र मान्छेहरु लगाएर ‘भौतिक आक्रमणको प्रयास’ समेत गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुरक्षा माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै बुधबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय…